Imbali yeMatyoshka, unodoli waseRussia | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukuba sizibuze ukuba yeyiphi eyona nto siyikhumbulayo esinokuya nayo ekhaya emva kohambo eRashiya, ngokuqinisekileyo uninzi lwethu belunokuphendula ngaphandle kokuthandabuza eyona nkumbulo intle yimatrioshka.
Enye yezona zinto zokudlala zaziwayo emhlabeni, oya kuthi uzichonge ngokulula nokuba awuzange utyelele iRussia ngaphambili. Ngapha koko, udumo lwabo lunjengokuba ii-matrioshka ziye zaba luphawu lokuhombisa kunye nefashoni. Ngaphezu koko, unokuba nematriki ekhaya kwaye awukhumbuli ukuba uyifumene phi.
I-matrioshkas inomdla wemvelaphi kwaye inentsingiselo enkulu kubantu baseRussia xa beyifumana njengezipho. Ukuba ubusoloko uzibuza ukuba yeyiphi imbali yale nto yokudlala, livela phi igama layo kwaye imele ntoni, awungekhe uliphose eli nqaku apho ndiza kuyiphendula kuyo yonke le mibuzo.
1 Yintoni matrioshkas?
2 Yintoni emele i-matrioshkas?
3 Zenziwe njani i-matrioshkas?
4 Livela phi igama matrioshka?
5 Uthini umqondiso wematrioshkas?
6 Yintoni imbali yematrioshkas?
7 Imyuziyam yaseMoscow Matryoshka
8 Nika i-matrioshka
Aba ngoonodoli ngomthi abagcina iimpendulo zabo ngokwahlukeneyo.. Kuxhomekeke kubukhulu be-matrioshka kamama, ngaphakathi sinokufumana phakathi ubuncinci bezihlanu kunye nobuninzi beematrioshka ezingamashumi amabini, nganye incinci kunale yangaphambili. Kuyamangalisa!
Yintoni emele i-matrioshkas?
I-matrioshka imele abafazi baseRussia abahlwempuzekileyo kwaye bayimpawu yenkcubeko yelizwe.
Zenziwe njani i-matrioshkas?
Ukwenza i-matrioshkas, ezona mithi zisetyenziswayo zezo zivela kwi-alder, i-balsa okanye i-birch, nangona eyona mithi isetyenziswayo yi-linden.
Imithi iyagawulwa ngo-Epreli, kulapho ke izele yinyama eninzi, kwaye iinkuni zivuthelwa umoya iminyaka emibini ubuncinci ngokuthambisa iziphelo zazo ngencindi ukunqanda ukuqhekeka kweenkuni.
Bakuba belungile, abachweli basika ubude obufanelekileyo kwaye babathumela kwindawo yokusebenzela ukuze basebenze iinkuni kwizigaba ezili-15. Imatrioshka yokuqala eyenziwayo ihlala incinci.
Livela phi igama matrioshka?
Igama lale nto yokudlala livela ku «Matriona», enye yezona zinto zidumileyo kwiRussia yakudala, ethi yona isuke kwisiLatin «mater» Oko kuthetha ukuba ngumama. Emva kwexesha igama elithi "Matriona" lahlengahlengiswa kwi-matrioshka ukumisela lo nodoli. Amanye amagama asetyenziswayo ukubhekisa kumatrioshka ngamagama anjenge-mamushka kunye ne-babushka.
Uthini umqondiso wematrioshkas?
I-matrioshkas yaseRussia ifanekisela ukuchuma, ukuba ngumama kunye nobomi obungunaphakade. Oko kukuthi, usapho olukhulu nolumanyeneyo apho umama azala intombi, oku kumzukulwana wakhe, yena kumzukulwana wakhe njalo njalo de amele umhlaba ongenasiphelo.
Kuqala, kwakukrolwe oonodoli ababhinqileyo kuphela, kodwa kamva amanani amadoda ayaphinda aphindaphindwa ukuze kugqitywe usapho kwaye emva koko lumele amanye amaxabiso anje ngobuzalwana phakathi kwabazalwana. Ngokuhamba kwexesha, kwenziwa i-matrioshkas zaseRussia ezazimele amanani ezembali okanye zoncwadi.
Yintoni imbali yematrioshkas?
Kuthiwa ekupheleni kwenkulungwane ye-XNUMX umthengisi waseRussia kunye nomxhasi uSavva Mamontov wenza uhambo oluya eJapan apho wayetyelele umboniso wobugcisa apho wafunda khona into eyayiza kuba sisandulela sematrioshkas. Yayingumboniso woothixo abasixhenxe ababengomnye ngaphakathi komnye enguFukurokuju (uthixo wolonwabo nobulumko) oyena mdala kunye nalowo wayequlathe ezinye izithixo.
UMamontov wayigcina le ngcinga kwaye xa ebuyela eRashiya wayibeka kumzobi kunye nojika uSergei Maliutin ukuze enze eyakhe inguqulelo yesiJapan. Ngale ndlela, unodoli wadalwa owayemele umlimi owonwabileyo waseRussia owamkela yonke inzala yakhe.
Le nto yokudlala yabangela uvakalelo kwi-Fair ye-1900 yeHlabathi yeParis, apho yaqhubela phambili ukuphumelela imbasa yobhedu, kwaye Imizi-mveliso yakhawuleza yavela eRashiya ivelisa i-matrioshka ezithengiswayo kwilizwe liphela naseNtshona. Ngale ndlela iye yaba luphawu lwenkcubeko yaseRussia kunye nesikhumbuzo esimele ilizwe. Ingcibi nganye ikrola oonodoli bayo kwaye ziye zaba ziithoyi zexabiso elikhulu kuba ngamanye amaxesha zizinto zomqokeleli.
Imyuziyam yaseMoscow Matryoshka
Ngapha koko, zibaluleke kangangokuba ngo-2001 yavulwa eMoscow, Imyuziyam yaseMatryoshka yokwazisa ngembali yezi zinto zokudlala kunye nokuzivelela kwazo ngokuhamba kwexesha.
Imyuziyam ibonisa ezinye ze-matrioshkas zokuqala zaseRussia ezenziwe ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX kunye nendlela eyile ngayo uyilo lwayo kule minyaka idlulileyo.
Umzekelo, ngeminyaka yoo-1920 iiBolshevik matrioshkas zazimele abasebenzi kwaye nomfanekiso we "kulak" (igama elalisetyenziswa ngokujongwa ukubhekisa kubalimi abazizityebi) waphinda waveliswa enxibe ikepusi kwaye iingalo zinqumla isisu esikhulu.
Ngexesha le-USSR, urhulumente wayefuna ukumilisela ubuzwe beSoviet kwi-matrioshkas kunye nezizwe ezahlukeneyo ezinjengeBelarusian, iUkraine, iRussia, njl. Nokuba kukhuphiswano lwesithuba, ingqokelela enkulu yoonodoli boosomajukujuku nayo yaveliswa ngesuti yabo yokuntywila kunye nomjukujelwa wasemajukujukwini.
Emva kokuphela kwe-USSR, umxholo we-matrioshkas wahluka kunye nabapolitiki abadumileyo kunye nosaziwayo abahlukeneyo bamanye amazwe baqala ukumelwa.
Ukuthatha ukhenketho lokuqokelela kuyathakazelisa ukuthelekisa ezona zinto zemveli zemveli kunye nezo zangoku. kananjalo kunye namanani aseJapan e-dio Fukuruma awabakhuthazayo. Imyuziyam ikwabonisa umahluko phakathi kwe-matryoshka evela kwimimandla eyahlukeneyo yase-Russia kwaye inikezela ngolwazi ngobomi kunye nemisebenzi yabakhokeleli kunye nabapeyinti baseRussia abaphambili.
Kwabantu baseRussia kunentsingiselo enkulu ukunika i-matryoshka njengesipho. Xa umntu efumana enye yezi zidoli njengesipho, kufuneka bavule i-matrioshka yokuqala kwaye benze umnqweno. Nje ukuba kuzalisekiswe, emva koko unokuvula unodoli wesibini kwaye wenze omnye umnqweno omtsha. Ke ukuya kufikelela kumtshato wokugqibela kunye nomncinci.
Nje ukuba zivulwe zonke ii-matrioshka, nabani na ofumene esi sipho kufuneka asinike inzala yakhe njengophawu lokuba bayabhabha kwindlwane yabo. Ekuqaleni oku kwenziwa ngabafazi. Ngabo kuphela ababephethe amakhaya kwaye babenokwenza iminqweno yokuba ekugqibeleni bahambise imatriki kubantwana babo.
Kungenxa yoko le nto ukuba umntu ekunika imatrioshka, Kwinkcubeko yaseRussia kuthiwa ukunika uthando lwakho ngohlobo lwento yokudlala.
Ngakolunye uhlangothi, nguwe oza kunika i-matryoshka njengesipho, ukongeza ekunikezeleni le nkcukacha, eyona nto unokuyenza kukuxelela ummkeli intsingiselo kunye nembali yesipho ngoku uyazi yiyo. Ngale ndlela, uya kusixabisa kakhulu isipho kwaye azi ukuba enze ntoni nge-matryoshka yamva nje kunye neyona incinci.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Imbali yeMatyoshka, unodoli waseRussia